IFM – Fampirantiana : maneho ny any « Atsimo » i Rijasolo | NewsMada
IFM – Fampirantiana : maneho ny any « Atsimo » i Rijasolo
« Tsy afaka hilaza ho mahafantatra tsara iny faritra atsimo iny aho », hoy i Rijasolo, mpanakanto matihanina amin’ny fakana sary. Na izany aza, voasarik’izany toerana izany ny lehilahy, nandalo tany matetika ary nitahiry an-tsary ny zava-nisy, ny « sendra nandalo », ny mahaliana ary ny mampisongadina iny faritra iny.
Araka izany, « Atsimo » no lohahevitr’ity angon-tsarin’i Rijasolo ity, izay aranty, manomboka androany, etsy amin’ny Instiut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely hatramin’ny 20 febroary izao. Araka ny fanazavana, nalaina teo anelanelan’ny taona 2005 sy 2007 ireto sary ireto, izany hoe, tsy tamin’ny dian’i Rijasolo indray mandeha fa nandritra ny fivezivezeny tany atsimo noho ny asany.
Misantatra ny fampirantiana etsy amin’ny IFM amin’izao taona 2016 izao ity mpanakanto ity. Fanindroany kosa izao ny nampiantranoan’ity foibe ity ny sanganasany ka tamin’ny taona 2009 ny voalohany. Lohahevitr’ireo sary narantiny tamin’izany fotoana izany ny « Un lieu acceptable ».
Efa manana ny maha izy azy i Rijasolo raha ny tontolon’ny saripika kanto no resahina. Matevina ny traikefany, nahafahany namoaka boky sary, mitondra ny lohateny hoe « Madagascar, nocturnes », ny taona 2013, sy « Akamasoa, rêves d’enfants », herintaona monja taorian’io. Ankoatra ny maha mpanakanto mpakasary azy, nianatra momba ny fakana sary ampiasaina amin’ny gazety ihany koa i Rijasolo.